ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: တော်ဝင်နှင်းဆီပိုင်ရှင် ဦးစိုးညွန့်ရဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (ရုပ်သံ)
တော်ဝင်နှင်းဆီပိုင်ရှင် ဦးစိုးညွန့်ရဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (ရုပ်သံ)
(စစ် ကိုနိုင် ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှ ယူပါသည်)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 12:07 AM
အမှန်တကယ် ဒီလို ပြောရဲတဲ့ လူတွေ လိုပါတယ် ... လေးစားပါတယ် ဦးစိုးညွန့်
Precious speech.Totally agreed
with respect . Ko Freddie.
min maw said...
Very brave man , very sincere and very honest I bow to you U Soe Nyunt.
Please give more speech whenever appropriate and enlighten the narrow minded people . There are many narrow minded religious bigot in our country .
All the people who are in the same boat with U Soe Nyunt must be ready to protect him when something happen to this brave and sincere man. Let us put the military criminals on trial at the International Court of Justice.
ဆရာ လွဏ်းဆွေက ပြောင်မြောက်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဆိုပြီး တင်ထားကတည်းက ထင်တော့ ထင်သား၊ စစ်အစိုးရဂိုဏ်းဝင်တွေကိုဆော်မဲ့ လူဆိုတာ။
လက်စသတ်တော့ ဦးစိုးညွန့်ဆိုတာ NLD supporter and lobby ပဲ။
ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ် စစ်အစိုးရဝင်ဟောင်း ပုဆိုးဝတ်တွေလည်း မကြိုက် သလို NLD ကိုလည်း လုံးဝအားမပေးဘူး။ ခင်ဗျားတို့က ပုံစံသာမတူတာ အကျင့်ကတော့ အတူတူပဲ။ တခုမေးချင်တယ်.. မလေးရှားမှာ မြန်မာတွေ အနိုင်ကျင့် အသတ်ခံရတော့ ခင်ဗျားတို့ ငွေမပြောနဲ့ ပါးစပ်လေးနဲ့တောင် ဖေးမမှုရှိလား။ ဒုက္ခရောက်သူတွေကို ကူညီတယ်ဆိုတာ ဘာမှ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တာ၊ လှုံ့ဆော်တာမဟုတ်ဘူး။
အခုလုပ်နေတဲ့ ဥပဒေဆိုတာကြီးက မဟန်ရင်လည်း မြန်မာအမျိုးသမီးလေးတွေ ယူပြီးတော့ မှ အနိုင်ကျင့်ခံ၊ အတင်းအကြပ်ပြောင်းခိုင်းခံ နေရတာကနေ ကာကွယ်ဖို့ အစီအမံလေးဘာလေးရှိသလား။
မြန်မာပြည်မှာကိုယ့်ဖာသာကိုယ်တောင် စားဖို့ အနိုင်နိုင်ရုံးကန်နေရတာသိရက်နဲ့ ခိုးဝင်လာတဲ့ လူတွေ နိုင်ငံသားပေးလိုက်ရင် ပြဿနာအေးသွားမယ်လို့ပြောတာ ဘယ်ပါတီလည်း၊ ကြံဖွတ်က အဖြူကဒ်လောက်ပဲပေးနိုင်တာ ငါတို့က ပန်းရောင်ကဒ်ပေးပြမယ်၊ စစ်တပ်နှစ်ပေါင်း ၅၀ လောက်ဖျက်မှ ပျက်တဲ့ တိုင်းပြည် ငါတို့ ၅ နှစ်အတွင်းရစရာမရှိအောင် ထပ်ဖျက်ပြမယ်ဆိုတဲ့ သဘောလား။
ခင်ဗျားတို့ ပါတီက ခေါင်းဆောင် ကြီး ခေါင်းဆောင်ငယ်တွေ လူထု အသံဘယ်လောက်နားထောင်သလဲ။ ခင်ဗျားတို့နဲ့ အမြင်မတူ တိုင်း အမြင်ကျဉ်းတဲ့ ကောင်တွေလို့ပဲ သမုတ်တာပဲမဟုတ်လား။
လူထု မျက်နှာရဖို့ ဒိထက်ထပ်ကြိုးစားလိုက်ပါဦးဗျာ။။
I agree with Auber on this issue.
U Soe Nyunt ဘ၀င်မြင့်နေပြိ
ဦးစိုးညွန့်ခင်ဗျား၊ နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောရဲတာကိုတော့ လေးစားပါတယ်။ ဦးစိုးညွန့်ရဲ့စကားမှာ ခွေးကခွေးအလုပ်ကိုလုပ်၊ နွားကနွားအလုပ်ကိုလုပ်လို့ဆိုထားတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေကို လူတွေကို တရားဘာဝနာအားထုတ်ဖို့ တရားဟောတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါလို့ဆိုထားတယ်။ ပြီးတော့ ဘုန်းကြီးတွေက ဥပဒေရေးဆွဲရေးကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို ကဲ့ရဲ့ထားတယ်။ ချုံပြီးပြောရရင် ဘုန်းကြီးတွေက မနှိုင်းသင့်တာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ထားတယ်။ ဒါတွေကို ကြည့်ရင် NLD ကို မေးပေးရမှာကိုတောင်ကြောက်လာပြီ။ ဘာမှမရှိတာတောင် ဒီလောက်ပြောရဲ့ရင် အာဏာရလာရင် လော်စပီကာတတ်ပြီး ရပ်ကွက်ကို လှည့် ဆဲဆိုနိုင်တယ်။ ပြောရဲ့တာကို သဘောကျပါတယ်။ ပြောဆိုတဲ့နေရာမှာ ယာဉ်ကျေးပါစေ။ ပါးစပ်ကသာတရားစကားပြောတာ လက်တွေ့မှာ ဘုရားရှေးခိုးပုံမပေါ်ဘူး။ ဒေါ်စုဟာ အခုချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့အားထားရတဲ့ တဦးတည်းသော ခေါင်းဆောင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်စုပါတီမှာ ဘယ်လိုလူတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ လေ့လာမှဖြစ်တော့မယ်။ ဦးစိုးညွန့် နိုင်ငံရေးလုပ်ချင်ရင် ကိုယ့်ဘာသာလုပ်။ လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်လာရင်၊ အာဏာရလာရင် ဘာလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာကို ပြောပြီးမေးဆွယ်။ ဘုန်းကြီးတွေက သူ့အလုပ်ကို သူလုပ်နေတာပါ။ ဘုန်းကြီးက ဓါးကိုင်မထားပါဘူး။ လက်နက်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ အများထောက်ခံမှ ဥပဒေဆိုတာ ဖြစ်လာမှာပါ။ မကြိုက်ရင် မထောက်ခံနဲ့။ သူများကိုအပုတ်ချမပြောခင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရင့်ကျက်အောင် လေ့ကျင့်ပါ။
Thein Zaw said...
ဦးစိုးညွန့်ခင်ဗျား ... ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် လောဘ ဒေါသ မောဟမကင်းလို့ အာဏာရခြင်နေတာ မဟုတ်လားဗျာ..။ ခင်ဗျားဟာ အာဏာရခြင်နေတာပဲ ရှိတယ်..။ အမျိုးသားရေးကို ဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေး လုံးလုံးမှ မရှိဘူးဆိုတာ တွေ့ရတယ်။ လူတွေဟာ အတူတူပါပဲ....သူ့ဟာသူ ဘယ်သူနဲ့ယူယူ.. သူကြိုက်တာ သူယူပေ့ါလို့ ခင်ဗျားပြောသွားတော့ ငယ်ငယ်ကဖတ်ဖူးတဲံ့ စာသားလေးကို ပြန်သတိရမိတယ်ဗျာ.. (ရေးသူကိုတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး..) .. သရဏဂုဏ် သုံးပါးရဲ့ တန်ဖိုးကိုနားမလည်ပဲ လူလူခြင်း အတူတူပါပဲဟု ပြောနေသူတွေ ကိုယ့်သမီးကို ခွေးထီး အမြီးဖြတ်ပြီး ပေးစားကြည့်လိုက်ပါ.....တဲ့. ။ မြန်မာမှာမွေး၊ မြန်မာဆန်စား၊ မြန်မာမှာ ကြီးပြင်းပြီး မြန်မာအမျိုးသားရေးကို ကာကွယ်လိုစိတ် နဲနဲလေးမှ မရှိတဲ့ ခင်ဗျားတို့လိုလူတွေ များနေတဲ့ ခင်ဗျားတို့ပါတီကို ကျနော်တို့ ဘယ်လို မဲပေးရဲပါ့မလဲဗျာ...။
U Soe Nyunt, I reject your comments on Burmese Sangha's involvements into politics.
You have to look at other religious institutions. you work with Muslims and get benefits from them. you are going to destroy our country and Buddhism. All Muslims have rights to vote but no Buddhist monks. We, Buddhist monks are loosing our citizen rights. No politicians care about this. You, politicians, cheat us. We will fight for our citizen rights. We have rights to involve into politics. That is our freedom of right action.